उम्मेदवारको पावर ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
उम्मेदवारको पावर !
बैशाख २५, २०७९ आइतबार ८:१८:३९ | मिलन तिमिल्सिना
उम्मेद र वार मिलेपछि उम्मेदवार हुन्छ । चाकडी, चाप्लुसी, भनसुन, धम्की, घुर्की र त्यतिले पनि नपुगेपछि अर्को पार्टीमा बुर्कुसी मारेपछि उम्मेदवार भइन्छ । उम्मेद भनेको आशा, भरोसा र इच्छा । वार भनेको उमेद राख्ने आशाकारी । अर्थात उम्मेदवार भनेको अरुलाई आशा देखाउने व्यक्ति । पाखामा बसेर आशा देखाउन सकिँदैन । ठाउँमै पुगेर भाका र भाखा मिसाउनुपर्छ ।
उम्मेदवारमा पछिल्तिरको दुईवटा अक्षरलाई हेरौँ, वार । वार कि पार भन्ने अर्थ पनि लाग्यो । अङ्ग्रेजीबाट अर्थ्याउँदा चुनावी मैदानमा लड्दै गरेको या सङ्घर्ष गर्दै भनेको पनि बुझियो । अझ वारलाई अलिकति मिलाएर पावर पनि बनाउन सकियो । पावर भनेको शक्ति । कसैले सितिमिति सोच्नै नसक्ने सबै कुरा गर्न सक्ने क्षमता । त्यसैले उम्मेदवार हुनु भनेको पावर पनि थपिनु हो। पावर थपिएपछि उम्मेदवारले गर्न नसक्ने भन्ने केही पनि हुँदैन । सबैथोक गर्न सक्छ ।
अहिलेसम्म उम्मेदवारले सानातिना पावरको मात्र कुरा गरेका छन् । कसैले हेलिकप्टरबाट खेतबारीमा बीउ छर्ने र ३६५ दिन नै दशैँ मनाइदिने भनेका छन् । कसैले खोलामा पानीजहाज र कच्ची सडकमा रेल गुडाउने सपना देखाएका छन् । खाना, नाना र छाना त मामुली कुरो भैहाल्यो ।
उम्मेदवारले भन्न बाँकी भएका तर गर्छु भन्न सक्ने केही काम यस्ता पनि हुन सक्छन् :
* हरेक घरमा निःशुल्क ग्यास सिलिण्डर बाँडिनेछ । सिलिण्डरको माथि प्रेसर कुकरसमेत जडान हुनेछ । सिलिण्डर र कुकर भएपछि चामल, तरकारी, नुन, भुटन र मरमसलाको आवश्यक पर्ने छैन । ग्यास सल्काउनेबित्तिकै कुकरमा आफूले चाहेअनुसारको भात र तरकारी पाक्नेछ । यसो हुँदा चामल र तरकारी किन्न नसकेर कोही नेपाली भोको बस्नु पर्ने छैन ।
* ज्यानमा एकसरो लुगा लगाउन नपाएर कोही नेपाली नाङ्गो बस्नु पर्ने छैन । हरेक पालिकामा तयारी पोसाक उद्योग खोलिनेछ । गाउँठाउँमै पाइने सिस्नोबाट लुगा बुनि तयारी कपडा बनाइनेछ । उद्योगमा बनाउन भ्याइएन भने सिस्नोलाई सिधै कपडामा परिणत गरिनेछ । सिस्नोले पोल्न सक्ने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै त्यसमा टाँसिएका काँडालाई हटाइनेछ ।
* सबै नेपालीको आआफ्नो घर हुनेछ । घर नहुनेलाई नयाँ घरको व्यवस्था गरिनेछ, अहिले भैरहेको कच्ची घरलाई पक्की घरमा परिणत गरिनेछ । यसको लागि ‘मेरो आफ्नै घर, घामपानीको के डर’ भन्ने नारा तय गरिनेछ । यो नारालाई यथार्थमा बदल्न भरमग्दुर प्रयास गरिनेछ । कथमकदाचित घर बनाउन सकिएन भने घामपानी नै बन्द गरिनेछ । घामपानी नै बन्द भएपछि न पोल्ने डर भयो, न भिज्ने । त्यति भएपछि घर नै किन चाहियो ?
* काम नपाएर बेरोजगार बस्नुपर्ने दिनको अन्त्य गरिनेछ । हरेक घरका एक जनालाई सरकारी जागिरको व्यवस्था मिलाइनेछ । त्यसको लागि कोटा पुगेन भने घरघरमै सरकारी कार्यालय खोलिनेछ । यसको लागि ‘आफ्नै घर, आफ्नै कार्यालय’ अभियान सुरु गरिनेछ । घरमै सरकारी कार्यालय हुँदासमेत काम नपुग्ने परिवारका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत जुम्रा पार्ने र मार्ने काममा लगाइनेछ । एक जुम्रा पारे बराबर १० रुपैयाँ र मारे बराबर १० रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ ।
* अब पढ्नेको लागि स्कुल कलेज धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिनेछ । सबैको हातहातमा मोबाइल फोन र सबैको फोनमा टिकटक, फेसबुक, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल भएकाले त्यसकै माध्यमबाट पढ्न सक्ने वातावरण बनाइनेछ । पढ्नको लागि कसैलाई अनिवार्य र करकाप गरिनेछैन । ‘पढेरभन्दा परेर जानिन्छ’ र ‘हात्ती पढेर ठूलो भएको हो र’ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्दै बालबालिका र युवालाई परेर जान्ने र नपढी ठूलो हुने वातावरण मिलाइनेछ । टिकटकमा भाइरल बनाएर त्यसैबाट आयआर्जन गर्न सक्ने क्षमता बढाइनेछ ।
* सडकमाथिका बिजुलीका तार भूमिगत गरिनेछ । तार रहेका पोलमाथि रेल गुडाइनेछ । सडक वारपार गर्नको लागि जेब्राक्रस भएको ठाउँमासमेत सानो रेलको व्यवस्था गरिनेछ । रेल चढेरै सडक वारपार गर्न सकिने वातावरण मिलाइनेछ । यसो हुँदा कुनै पनि नेपालीले रेल चढ्न पाइएन भनेर दुखेसो गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी रहने छैन ।
* गाउँगाउँमा केबलकार पुर्याइनेछ । खेतमा पानी लगाउन र बारीमा मकै गोड्नसमेत केबलकारबाटै जान सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । खेतबारीको डिलमा भएका ठूल्ठूला रुखलाई केबुलकार हिँड्ने पोल र बारीको कान्लामै उम्रिने लहरोलाई तारको रुपमा परिणत गरिनेछ । गाउँठाउँमै पाइने काठबाट बाकस बनाएर त्यसैलाई केबलबार बनाइनेछ । यसरी स्थानीय सीप र सामग्रीको प्रयोगबाट आधुनिक प्रविधिको उपयोगतालाई जोड दिइनेछ ।
* गाउँगाउँमा अस्पताल बनाइरहने झण्झटबाट मुक्त हुन रोगव्याधी लाग्नै नसक्ने वातावरण मिलाइनेछ । यसको लागि रोग लगाउने भाइरस, ब्याक्टेरिया र कीटाणुलाई पहिल्यै पहिचान गरेर निर्मूल गरिनेछ । गाउँठाउँमा रहेका धामी, झाँक्री र वनझाँक्री समेतको सहयोगमा सम्भावित चोटपटक, दुर्घटना र भवितव्यलाई चारकोस पर भगाइनेछ । यसरी ‘स्वस्थ नेपाली, सम्मुनत नेपाली’को नारालाई चरितार्थ बनाइनेछ ।
* जन्मनेबित्तिकै वृद्धभत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।
यी सबै गर्न पावर चाहिन्छ । उम्मेदवारसँग मात्रै यस्तो पावर हुन्छ । अनि यस्तो पावर भएको उम्मेदवार चुनाव अघिसम्म मात्र हुन्छ । चुनावपछि त कि जनप्रतिनिधि हुन्छ कि पराजित । उनीहरुसँग भएको पावर हेर्न फेरि अर्को चुनाव पर्खनुपर्छ ।